China Industrial Gelatin for Match ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
I-Gelatin Yezimboni yomdlalo Imboni yokukhiqiza ithatha ngokunenzuzo ukwakheka kwama-pores ngokuvuthwa kwegwebu le-colloid, kuhlanganiswe ne-oxidizer, i-agent yokuthungela nokugcwalisa, ukuyenza ivuthe ngokushesha
IGelatin iyi-macromolecule yemvelo, ngakho-ke inezici ezithile ze-macromolecule. I-Gelatin ingahlangana nobunzima obufinyelela izikhathi eziyishumi isisindo sayo emanzini, bese imunca amanzi futhi ivuvuke, okungavimbela umkhiqizo ukuthi ungangeni ekwehleni noma ekuphelelwe amanzi emzimbeni nasekunciphiseni. Lapho i-gelatin eyomile ifakwa emanzini anele, singabona kuqala ukuthi ungqimba lwayo lwangaphandle luyanda kancane. Njengoba isikhathi siqhubeka, ukwanda kancane kancane kuya kungqimba engaphakathi. Lesi simo sibizwa ngokuthi "ukuvuvukala", noma "ukuvuvukala" okuhlangene .I-gelatin enwetshiwe ifutheliswa ibe ngaphezu kwama-35 ℃ ukwakha isixazululo esifanayo namanzi. Ngamafuphi, i-gelatin iqale ifakwe emanzini abandayo imizuzu engama-60 bese incibilika kubhavu wamanzi ngaphansi kwama-80 ℃.
Isixazululo esine-gelatin singashukunyiswa masinyane ukwakha umzimba ophuphuma amagwebu, futhi okuqukethwe yi-gelatin kanye nobuningi bezinhlayiya kunquma ukwakheka komkhiqizo ophuziwe.
I-Industrial Gelatin yomdlalo uhlobo lwekhwalithi enhle ye-gelatin esetshenziswe ngokukhethekile ekukhiqizeni umentshisi. Ngenxa yekhono layo elihle eligwebu kanye ne-viscosity ephezulu, idlala indima ebalulekile njenge-ejenti ekhihlizayo ekukhiqizeni umentshisi.
Ubuchwepheshe bokukhiqiza be-gelatin
1. Cwilisa imfucumfucu yesikhumba emanzini kalimu izinsuku ezingama-3-5
2. Umshini wokuwasha isikhumba uzohlanza futhi unyakazise isikhumba amahora we-3-4 (ngalesi sikhathi, isikhumba semfucuza esingcolile futhi esiqinile sizohlanzeka futhi sithambe);
3. Bese ufaka isikhumba ku-hydrochloric acid yezimboni bese usibilisa ngamanzi.
Amahora angu-4, 6 kuya kwayi-10 kamuva, izingxenye ze-gelatinous emfucumfucwini yesikhumba zingena emanzini, amanzi e-gelatinous akhishwa emgodini wensimbi ovulekile, futhi afakwa nge-hydrogen peroxide inzalo, i-bleaching;
5. Ngemuva kobusuku bokupholisa, amanzi asemgodini wensimbi azophenduka abe yi-gelatin, bese eyomiswa futhi achotshozwe kwakhiwe izinhlayiya ze-gelatin.
Langaphambilini I-Gelatin Yezimboni yeJelly Glue
Olandelayo: I-Gelatin Yezimboni yePaintball